परदेशी भुमिबाट छोरालाई जन्मदिन को अवशरमा आमाको मार्मिक शुभकामना ! – Nepali news portal
लेखिका प्रभा घिमिरे हाल इजरायल
बुद्ध संदेशको लागि इजरायल डेक्स मध्यपुर्व सम्बाददाता सरिस्मा बराल ( उमा )
छोरो आज तिमीले यस धर्तिमा पाइला टेकेको दिन । आज‌ यस खुशीको‌ पलमा पनि म सधैँझै तिम्रो साथमा सगैँ हुन सकिन। हरेक साल तिम्रो जन्म दिनमा ,”छोरो आर्को सालको जन्म दिनमा त तिमीसगै बसेर तिम्रो जन्म दिन रमाइलो गरि‌ मनाउनुछु” भने तापिन समयले कहिल्यै पनी साथ जुराएन यो सालको तिम्रो जन्म दिनमा पनि म तिमी संग हुन पाइन।
तिम्रो जन्म दिनको यो खुसियालीको‌ अवसरमा तिम्रो साथमा हुन नपाए पनि टाढा बाट भएपनी तिम्रो उज्वल भबिस्य को कामना गर्दछु जुन दिन म आमा बनेको थिए मेरो जीवनको सबै भन्दा खुशीको‌ पल नै तेही थियो होला। त्यो दिन मेरो लागि आज पनि ताजा नै छ । छोरो त्यो खुशीको‌ कारण तिमीले नै थियौ ।
एउटा नारी लाई आमा हुनुको रहर कस्तो हुन्छ भन्ने त म बयान गरेर कहिल्यै सक्दिन। तिमीहरुको आमा बन्नु पाउदा म आँफैलाई भाग्यमानि ठान्दछु । जसरी‌ यस खुशीयालीमा तिमी सगैँ बसेर केक् काटेर तिम्रो जन्म दिन हर्ष‌ उल्लाशको‌ साथ मनाउने रहर हुँदा हुँदै पनि पुरा हुन सकेन तेसरी नै कतीपय कुराहरु मनले चाहेर पनी पुरागर्न नसकिने रहेछ। समय र परिस्थिति संग हिंड्न् पर्दों रहिछ। मलाई पनी कहाँ रहर थियो र तिमीहरु हरू बाट टाढा भएर बस्नलाई ।
के गर्नु छोरो यो सबै हाम्रो परिस्थिती र बाध्यता थियो तिमीहरु लाई पनि सबै कूरा थाहा छ, मैले भनि राख्नु पर्दैन । तिमीहरु धेरै बुज्ने भइसकेका छौ! छोरो म जतिनै टाढा भएपनी मेरो माया कहिले पनी टाढा भएन र हुँदैन पनि ।हरपल तिमीहरु को लागी नै मेरो मुटु धढ्कि रहेको हुन्छ । हर पल तिमीहरु को भविष्य को बारेमा सोचिरहेको हुन्छु , तिमिहरु को खुशी खोजीरहेको हुन्छु । तिमिहरु लाई कसरी खुशी बनाउन सक्छु होला भन्ने तिर मात्र सोचीरह्न्छु ।
संसारको खुशी नै तिमी लाई मिलोस् भन्ने लाग्छ सधैं भगवान संग तिम्रो उज्वल भविष्य र शु-स्वाथ्य को कामना गर्दछु तिम्रो हरेक सपनाहरु पूरा होस् छोरो तिम्रो हरेक पाइला पाइलामा‌‌ म शफलताको कामना गर्दछु ,तिम्रो सु-स्वास्थ्य को कामना गर्दछु र म सधै तिम्रो लागि भगवान संग पार्थना गर्दछु। छोरो तिमि असल र ज्ञानी बन्नु तिम्रो ममी को आशिर्बाद सधैं तिम्रो साथमा छ।मुटु भरि माया ममता लिएर तिम्रो जन्म दिन को धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु।
प्रकाशित मङ्गलबार १७ भदौ, २०७६ ### परदेशी भुमिबाट छोरालाई जन्मदिन को अवशरमा आमाको मार्मिक ###
इजरायलमा भव्य तीज महोत्सव कार्यक्रमको मुनाफा रास्कोट अस्पताल लाइ हस्तान्तरण गरिने !
आज मिति २०७६, भदाै १७ गते मंगलबार, राशिअनुसार आजको आफ्नो भाग्य हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)